आयुर्वेदिक औषधिको प्रयोगले छिट्टो निको हुँदै संक्रमितहरू
विराटनगर, ३ भदौ । कोरोना संक्रमितहरू आयुर्वेदिक औषधिको प्रयोगले छोटो समयमा निको भएको बताइएको छ ।
कीर्तिपुरस्थित आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्रमा भर्ना भएका कोरोना संक्रमित ३३ जना सात दिनमै निको भएर घर गएका छन् । सामान्य लक्षण देखिएका तथा लक्षण नदेखिएका संक्रमितहरू आयुर्वेदिक औषधिको सेवनले निको भएको राष्ट्रिय आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्रका अधिकृत डा. अमितमान जोशी बताएका हुन् ।
राष्ट्रिय आयुर्वेदिक अनुसन्धान आयोगसँग आयुर्वेदिक विज्ञहरूले छलफल गरी श्वासप्रश्वाससम्बन्धी रोगमा प्रयोग गरिने र रोगप्रतिरोधी क्षमता बढाउने जडीबुटी मिलाएर बनाइएको औषधिको नाम भने राखिएको छैन । दिनको तीनपटक उक्त औषधिको सेवन गरेका बिरामीमा सात दिनपछि पीसीआर परीक्षण गराउँदा सबैको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको डा. जोशीले जानकारी दिए ।
औषधिलाई आयुर्वेदिक पद्दति अपनाएर बनाएको भए पनि सुरुवाती चरणमा दीर्घरोगी तथा गर्भवती महिलामा भने यसको प्रयोग नगरिएको डा. जोशीको भनाइ छ । औषधि अझै अनुसन्धान प्रक्रियामै रहेको कारणले अन्तिम निष्कर्षमा पुगेपछि मात्र सबै उमेर समूहका दीर्घरोगीलाई दिन मिल्ने हुन्छ ।